उपचारका लागि प्रधानमन्त्री ओली पुन: गए सिंगापुर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ५, २०७६ तस्बिर : अंगद ढकाल
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरबाट फर्केको डेढ सातापछि पुन: बिहीबार उपचारका लागि सिंगापुर गएका छन् । उनले आफ्नो स्वास्थ्यमा धेरै समस्या नरहेको बताएपनि एक महिनामा दोस्रोपटक उनी उपचारकै लागि सिंगापुर गएका हुन् । उनी भाद्र २० गते फर्किने बताइएको छ ।
१२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ओली गत साउन १८ मा सिंगापुर गएर २७ गते फर्केका थिए । त्यहाँ रहँदा उनले प्रयोग गरिरहेको औषधिको मात्राहरु परिवर्तन गरिएको र त्यसमा थप फलोअप गर्नका लागि सिंगापुर गएको जानकारी दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई एउटा औषधिको डोज थप्नु वा मिलाउनुपर्ने भएकाले जान लागेको ब्रिफिङ गरेका थिए।
उनले बुधबार आयोजित कार्यक्रममा संविधान दिवसअगाडि नै आउने भनेका थिए । उनी भाद्र २० गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिइएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १३:४४
भाद्र ५, २०७६ गणेश राई
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पदावधि बिहीबार सकिँदै छ । पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, मध्यपश्चिमाञ्चल, कृषि तथा वन र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति शुक्रबार बाहिरिनेछन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशको चारवर्षे कार्यकाल विवादकै सेरोफेरोमा बितेको छ ।
उपकुलपति ढकालले कमजोर मापदण्ड बनाएर प्राध्यापक बढुवा गरेको र ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आरोप छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा स्थापित उक्त विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा कायम गर्नसकेको छैन ।
त्यसको सट्टा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई खुसी पार्न आफ्नो स्वामित्वमै नरहेको २० बिघा जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन मन्जुरी दिएका छन् । ‘धुर्मुस(सुन्तली फाउन्डेसन हाम्रो गौरव हो, त्यसैले क्रिकेट मैदानको चौडाई २ सय ५० मिटर नपुग्ने भएपछि महानगरपालिका, त्रिवि र हामीबीच सम्झौता भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसको सट्टा वडा नं.२० मा जग्गा दिन्छौं भनेका छन् ।’
विश्वविद्यलायमा जहिले पनि राजनीति हावी हुँदा शैक्षिक गतिविधि ओझेलमा पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘विश्वविद्यालयको अथाह सम्पत्ति छ, भोगचलनमा ल्याउन सकिएको छैन । प्रयास गर्दा पनि सफल भइएन,’ कोइरालाले भने, ‘२० वर्ष पुरानो पाठ्यक्रम पढाएर अघि बढिँदैन । पाठ्यक्रम तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ विज्ञ समितिलाई पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी दिए पनि बन्न नसकेको उनले बताए ।
उपकुलपति श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार भट्टले आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय काठमाडौंमै बिताए । ४ वर्षको अवधिमा २३ पटकसम्म गरी २ सय ६४ दिन ताला लागेको छ । उपकुलपतिको काम गर्न विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन डा. पूर्णबहादुर चन्दलाई र रजिस्ट्रारको कामकाज गर्न शिक्षा संकायका डिन डा. गोविन्द विष्टलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । चैत २७ मा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा लागेको ताला खुलेको छैन । नेविसंघले दुई/दुई उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएको भन्दै ताला लगाएको हो ।
– दीपक परियार (पोखरा), विनोद भण्डारी (विराटनगर), दुर्गालाल केसी (दाङ) र भवानी भट्ट (कञ्चनपुर) को सहयोगमा ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १२:४१